2 Samuel 14 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Samuel Nhoma a Ɛto So Abien 14:1-33
Yoab ne Tekoani bea bi faa adwene (1-17)
Adwene a Yoab fae no, Dawid huu akyi (18-20)
Ɔmaa Absalom san bae (21-33)
14 Seruia ba Yoab+ hui sɛ ɔhene ani agyina Absalom.+ 2 Enti Yoab soma kɔɔ Tekoa+ kɔfaa ɔbea nyansafo bi fii hɔ bae, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Mesrɛ wo, kofura awerɛhow ntama* na yɛ wo ho sɛ obi a ɔredi awerɛhow; mfa ngo nsra,+ na yɛ wo ho sɛ ɔbea a ɔde nna pii adi obi a wawu ho awerɛhow. 3 Afei kɔ ɔhene anim kɔka nsɛm yi kyerɛ no.” Ɛnna Yoab de nsɛm no hyɛɛ n’ano.* 4 Tekoani bea no kɔɔ ɔhene anim kɔkotow de n’anim butuw fam, na ɔkae sɛ: “O ɔhene, boa me!” 5 Ɛnna ɔhene bisaa no sɛ: “Ɛyɛ dɛn asɛm?” Na ɔbea no kae sɛ: “Me kunu awu ama mayɛ okunafo. 6 Ná w’afenaa wɔ mma mmarima baanu, na wɔn baanu no koe wɔ afuw mu. Ná obiara nni hɔ a ɔbɛpata wɔn, enti ɔbaako kum ne nua no. 7 Seesei abusuafo no nyinaa asɔre aba w’afenaa so, na nea wɔreka ne sɛ, ‘Fa nea okum ne nua no ma yɛn na ne nua a wakum no no nkwa* nti, yenkum ɔno nso.+ Sɛ ɛbɛma nea odi ade no din ayera mpo a, yɛbɛyɛ!’ Ogyasramma a aka ama me* no, wɔpɛ sɛ wodum no de popa me kunu din ne n’aseni* fi asaase so.” 8 Ɛnna ɔhene ka kyerɛɛ ɔbea no sɛ: “Kɔ wo fi, na mɛka ama wɔadi w’asɛm no ho dwuma.” 9 Afei Tekoani bea no ka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “O me wura ɔhene, ma me ne me papa fi mmom nsoa bɔne no, na ɔhene ne n’ahengua nni bem.” 10 Ɛnna ɔhene kae sɛ: “Obiara kɔfa ɛho asɛm ba bio a, fa no bra m’anim, na ɔrenteetee wo bio.” 11 Nanso ɔbea no kae sɛ: “Ɔhene, mesrɛ wo, kae Yehowa wo Nyankopɔn, anyɛ saa a nea me ba no ayɛ nti, nea ɔwɔ hokwan sɛ okum no tua ka* no+ beyi no afi hɔ.” Ɛnna ɔkae sɛ: “Sɛ́ Yehowa te ase yi,+ wo ba no ti nwi baako mpo rentɔ fam.” 12 Afei ɔbea no kae sɛ: “Mesrɛ wo, ma w’afenaa nka asɛm bi nkyerɛ me wura ɔhene.” Na ɔkae sɛ: “Kasa!” 13 Ɔbea no kae sɛ: “Adɛn nti na woanya adwene sɛ wobɛyɛ biribi saa atia Onyankopɔn nkurɔfo?+ Ɔhene asɛm a waka no kyerɛ sɛ ɔno ara abu ne ho fɔ, efisɛ ɔhene mmaa n’ankasa ba a wɔatwa no asu no nsan mmae.+ 14 Owu de, yebewu, na yɛbɛyɛ sɛ nsu a wɔahwie agu fam a wontumi nsesaw bio. Nanso Onyankopɔn rennye obi nkwa* mfi ne nsam, na mmom ɔhwehwɛ ɔkwan a ɔbɛfa so de obi a wɔatwa no asu asan aba ne nkyɛn. 15 Nea enti a mebɛkaa asɛm yi kyerɛɛ me wura ɔhene ne sɛ, nkurɔfo no maa ehu kaa me. Enti w’afenaa kae sɛ, ‘Ma me ne ɔhene nkɔkasa ɛ. Ebia ɔhene bɛyɛ n’afenaa abisade no. 16 Ebia ɔhene betie n’afenaa, na onipa a ɔrepɛ me atu me ne me ba koro pɛ no afi agyapade a Onyankopɔn de ama yɛn so no, obegye me afi ne nsam.’+ 17 Enti w’afenaa kae sɛ, ‘Ma me wura ɔhene anom asɛm mma me ahotɔ.’ Efisɛ me wura ɔhene te sɛ nokware Nyankopɔn no bɔfo; otumi hu papa ne bɔne. Yehowa, wo Nyankopɔn nni w’akyi.” 18 Ɛnna ɔhene buaa ɔbea no sɛ: “Mesrɛ wo, nea merebebisa wo yi, mfa biribiara nsie me.” Na ɔbea no kae sɛ: “Mesrɛ wo, ma me wura ɔhene nkasa.” 19 Afei ɔhene bisae sɛ: “Yoab na ɔhyɛ eyi nyinaa akyi anaa?”+ Ɛnna ɔbea no buae sɛ: “O me wura ɔhene, sɛ́ wote ase* yi, nea me wura ɔhene aka no yɛ nokware.* W’akoa Yoab na ɔkyerɛɛ me nea menyɛ, na ɔno na ɔde nsɛm yi nyinaa hyɛɛ w’afenaa ano. 20 W’akoa Yoab yɛɛ saa na ama woanya adwene foforo wɔ asɛm yi ho, nanso me wura nim nyansa te sɛ nokware Nyankopɔn no bɔfo, na onim nea ɛrekɔ so wɔ asaase yi so baabiara.” 21 Ɛnna ɔhene ka kyerɛɛ Yoab sɛ: “Yoo, medi asɛm no ho dwuma.+ San kɔfa aberante Absalom bra.”+ 22 Na Yoab kotow de n’anim butuw fam, na oyii ɔhene ayɛ. Afei Yoab kae sɛ: “O me wura ɔhene, ɛnnɛ na w’akoa ahu sɛ manya w’anim dom, efisɛ ɔhene ayɛ n’akoa abisade ama no.” 23 Afei Yoab sɔre kɔɔ Gesur+ kɔfaa Absalom baa Yerusalem. 24 Nanso ɔhene kae sɛ: “Ma ɔnkɔ n’ankasa fi, mma ɔmma m’anim.” Enti Absalom kɔɔ ne fi, na wamma ɔhene anim. 25 Israel nyinaa, na ɔbarima biara nni hɔ a n’ahoɔfɛ nti wɔkamfo no te sɛ Absalom. Efi ne nan ase kosi n’apampam, na dɛm biara nni ne ho. 26 Afe biara kɔ n’awiei a, na oyi ne ti nwi, efisɛ na emu yɛ no duru dodo. Sɛ oyi ne ti nwi na ɔkari a, na emu duru yɛ nnwetɛbona 200,* sɛnea na wobu nkaribo ano wɔ ahemfi no.* 27 Absalom woo mma mmarima baasa+ ne ɔbabea baako a wɔfrɛ no Tamar. Ná ɔyɛ ɔbea a ne ho yɛ fɛ yiye. 28 Absalom tenaa Yerusalem mfe abien, nanso wanhu ɔhene anim.+ 29 Ɛnna Absalom too Yoab nkra sɛ ɔmmra na ɔnsoma no ɔhene nkyɛn, nanso Yoab amma. Ɔfrɛɛ no ne mprenu so, na ɛno nso wamma. 30 Afei ɔka kyerɛɛ ne nkoa sɛ: “Yoab asaase na ɛda me de ho yi, na ɔwɔ baali* wɔ so. Momfa ogya nkɔto mu.” Enti Absalom nkoa de ogya kɔtoo afuw no mu. 31 Ɛnna Yoab sɔre kɔɔ Absalom fi, na obisaa no sɛ: “Adɛn nti na wo nkoa de ogya akɔto m’afuw no mu?” 32 Absalom ka kyerɛɛ Yoab sɛ: “Hwɛ! metoo wo nkra sɛ, ‘Bra na mensoma wo ɔhene nkyɛn na kɔka kyerɛ no sɛ: “Adɛn nti na mifi Gesur aba ha?+ Metenaa hɔ koraa a anka eye. Enti afei ma menkɔ ɔhene anim, na sɛ bɔne na mayɛ a, ma onkum me.”’” 33 Enti Yoab kɔɔ ɔhene anim kɔka kyerɛɛ no. Ɛnna ɔfrɛɛ Absalom, na ɔbaa ɔhene anim bɛkotow de n’anim butuw fam wɔ ɔhene anim. Ɛnna ɔhene few Absalom ano.+
^ Anaa “kyerɛɛ no nea ɔkɔ a ɔnka.”
^ Kyerɛ sɛ, anidaso biara a ɛwɔ hɔ sɛ obenya asefo.
^ Nt., “ne nkaefo.”
^ Anaa “wo kra te ase.”
^ Anaa “nea me wura ɔhene aka no, obiara rentumi nnan mfi ho nkɔ nifa anaa benkum.”
^ Bɛyɛ kilo. 2.3. Hwɛ Nkh. B14.
^ Ɛbɛyɛ sɛ ɛyɛ nkaribo bi a na wɔde kari ade wɔ ahemfi anaasɛ “ahemfi” dwetɛbona a ɛyɛ soronko wɔ dwetɛbona a obiara nim no ho.